Izibuyekezo ezimangalisayo ze-macOS Monterey zengeza usekelo Lwezinqamuleli | Ngivela ku-mac
Izibuyekezo ezimangalisayo ze-macOS Monterey zengeza usekelo Lwezinqamuleli
Njengoba izinsuku zihamba ngemva kokukhishwa kwenguqulo yokugcina ye-macOS Monterey, abathuthukisi bakhipha izibuyekezo ezihambisanayo ezinhlelweni zabo zokusebenza. ukuzivumelanisa nokusebenza okusha ezivele esandleni senguqulo yakamuva ye-macOS etholakalayo.
I-DaVinci Sula, I-Pixelmator, i-Affinity suite kube izinhlelo zokusebenza zokuqala esezivele zibuyekeziwe. Okulandelayo kube uhlelo lokusebenza lwekhalenda ye-Fantastic, uhlelo lokusebenza olufinyelela kunguqulo 3.5 futhi olungeza ukusekelwa Kwezinqamuleli, okunye kokusebenza okusha kwe-macOS Monterey.
Ngokungeziwe ekuhlanganisweni Nezinqamuleli, i-Fantastical ithuthukisa ukuphathwa komhlangano. Esikhundleni sokufaka imininingwane yoxhumana nabo ngamunye ozobamba iqhaza, i-url ingakhiqizwa ngaphakathi kohlelo lokusebenza ngomcimbi esingabelana ngawo nabo bonke ababambe iqhaza ngendlela esiyifunayo.
Esinye isici esisha ukubonakala kweziphakamiso, okusho ukuthi ungakwazi nquma ukuthi umhlangano uzowuhlanganyela yini nawo wonke umuntu onqabile ukuba khona. Ngokusho kwe-Fantastical, lo msebenzi uyindlela enhle "yokuvimbela osebenza nabo ukuthi baphikisane ngokuthi ubani onqabe umhlangano wemizuzu yokugcina."
Kubuye kwanezelwa ukuhlanganiswa neWebex, kanye ne-Zoom, i-Google Meet, ne-Microsoft Teams. Kufanele sengeze i-akhawunti yesikhulumi sokushaya ngevidiyo ku-Fantastical ukuze kuboniswe inketho entsha ngaphakathi kwemenyu Yemihlangano ukuze sithumele izimemo ezihambisanayo.
I-Las izaziso ezibucayi ngesikhathi Inketho evumela ukuhlunga izaziso ezingabalulekile kakhulu esizithola usuku lonke nayo yengeziwe, okusivumela ukuthi sigxile kwezibaluleke kakhulu.
I-Fantastcial iyatholakala ukuze ilandwe mahhala kodwa idinga ukubhalisa ukuze uyisebenzise.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Mac App Store » Izibuyekezo ezimangalisayo ze-macOS Monterey zengeza usekelo Lwezinqamuleli
Kungani isikrini se-Apple Watch Series 7 sinje
I-Pixelmator Pro manje isihambisana ngokugcwele ne-macOS Monterey